Category Somaliya – Cayaaraha dunida
November 21, 2018 Isboortiga waa awood wax weyn ka bedeli karta dunida aan ku nool nahay,waxay leedahay awood ay ku mideyso dadyoowga caalamka,waxay geesinimo gelisaa jiilalka soo koraayo iyadoo ka weecineyso waxyaabaha mustaqbalkooda wiiqa kara,waa aalad lagu burburin karo ismaandhaafka iyo khilaafyadda addunyadda hareeyey, sidoo kale isboortiga waxa More...
Bulshooyinka ku nool addunyada guudkeeda ayaa waxa ka mid ah qaar ay taarikhdu xusto kuwa oo lagu qadariyo waxyaabaha ay qabteen,waxaana aan maanta qalinka u qaadaneynaa in aan ifino doorka shariifka ah oo ay dumarka More...
30 04 2018 Xulka qaranka Soomaaliya ee da’doodu ka yar tahay 17ka sano ayaa u soo baxay cayaarta kama dambaysta ah ee koobka CECAFA U17 ee ka socda Burundi, ka dib markii ay 1-0 kaga badiyeen xulka Uganda More...
16 03 2018 War ka soo baxay xafiiska Gudoomiyaha Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubada cagta Mudane Cabdi qani Saciid carab ayaa Warbaahinta looga mamnuucay in ay Cayaartoyda dalka ugu yeeraan magcayada Cayaartoyda Ajaanibta More...
Naadigii Madbacada Qaranka oo dib loo howlgaliyay.
18 01 2018 Munaasabad lagu daah-furayay dib u howlgalinta Naadiga Madbacada Qaranka Soomaaliya ayaa Maanta waxaa lagu qabtay Muqdisho. Waxaa ka qeybgallay mas’uuliyiin ay ka mid ahaayeen Wasiirka Warfaafinta More...
C/qani Saciid Carab ” Lama shaqeyno Wasaaradaha ciyaaraha maamul goboleedyada.
01 Jan 2018. Cabdi qani Saciid carab oo ah guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa ka hadlay go’aankii ka soo baxay Wasaaradaha maamul goboleedyada oo ku aadanaa in Xiriirka lagu Saleeyo hab More...
Ra’iisal wasaare Kheyre oo soo gabagabeeyay Tarantankii kubadda Cagta maamul gobolleedyada.
imco, December, 23, 2017 Ra’iisal wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xassan Cali Kheyre ayaa ugu danbeyntii soo gabagabeeyay Tartanka Kubadda Cagta maamul gobolleedyada oo ay ku guuleysteen Cayaartooydii ku More...
DAAWO: Sida Kismaayo looga dabaaldegay kadib guusha xulka Kubadda Cagta Jubbaland.
Jimco, December, 23, 2017 Shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada ayadoo ay ka muuqatay farxad iyo reynreyn, kadib markii xulka kubadda cagta dowlad goboleedka More...
Isku aadka Tartanka maamul Goboleedyada Soomaaliya oo la sameeyay.
05 12 2017 Waxaa Muqdisho soo gaaray dhammaan maamul Goboleedyada sanadkan ciyaaraya tartankan markii labaad lagu qabanayo Muqdisho. Haddaba waxaa sanadkan ka qeyb galaya Lix Maamul Goboleed oo la isugu aadiyay More...